Hong-Kong: Misisika i Shina Hoe Mpirotsaka Mpomba an’i Beijing No Tokony Hisy Mba Hisian’ny Filaminan’ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2014 8:48 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Español, Deutsch, English
Nikarakara hetsika “Diabe Ho an'ny Demôkrasia” ho an'ny daholobe ny fikambanana olom-pirenena ‘Bodoy am-pitiavana sy am-pilaminana ny Afovoany (Occupy Central)’ , mba hanehoany fahavononan'ireo mpampivondrona ny demôkraty hiady ho an'ny demôkrasia tena izy ao Hong Kong. Sary avy tamin'i PH Yang, tsy ampiasaina amin'ny varotra.
Raha mbola manohy manao tsindry, mba hahazo anjara fitenenana bebe kokoa amin'ilay fifidianana ny ho mpitarika ny tanàna ireo mpikatroka mafana fo mitaky ny demôkrasia any Hong Kong ; efa nanakatona ny adihevitra momba io resaka io kosa ireo mpiasam-panjakana ambony any amin'ny taniben'i Shina, nanamafy fa ho an'ny fandriampahaleman'ny firenena no nanaovana ireo famerana napetraka amin'ny latsabato ireo .
Napetraka ho afaka hifidy mivantana voalohany ny lehibe mpanatanteraky ny tanàna i Hong Kong, faritra manana rafi-pitantanana manokana any Shina, izay hatao ny taona 2017, fa miteny kosa i Beijing fa tsy maintsy eken'ny kaomity voatendry ireo kandidà mirotsaka ho fidiana. Manahy ireo mpiaro ny Demôkrasia fa tsy hanana hisafidianana afa-tsy ny kandidà mpomba an'i Beijing i Hong Kong, izay mifanohitra amin'ny tanjon'ilay fifidianana.
Ny herinandro lasa teo, nihaona tamin'ireo mpanao lalànan'i Hong Kong tao amin'ny tanànan'ny tanibe Shenzhen mikasika ny fanovàna ny fizotry ny fifidianana ao amin'ny tanàna, ny filohan'ny Kaomitin'ny Lalàna Fototr'i Shina. Tao amin'ny zaikabe, niteny i Li hoe “tokony ho olona tia tanindrazana no olona mitantana an'i Hong Kong” raha tsy izany dia mety ho lasa antoko pôlitika tsy miankina ny tanàna.
Nanamarika eo ankilany i Siu Sin-por filohan'ny ‘Hong Kong Central Policy Unit’, fa satria i Shina mametraka fitantanana manana antoko tokana ihany, noho izany, mitovy amin'ny fandriampahaleman'ny fitarihan'ny Antoko Kaomionista Shinoa ny hoe fandriampahaleman'ny firenena. Araka izany, tsy hanaiky ny hisian'ny olona miady ho an'ny fanjavonan'ny fitondran'antoko tokana hirotsaka hofidiana ho lehiben'ny mpanatanteraka eo amin'ny tanàna ny governemantan'i Beijing .
Nanome tsiny ny fomba fijerin'ny governemantan'i Beijing, tao amin'ny vohikalan'ny hetsika i Benny Tai, iray amin'ireo lehiben'ny ‘Occupy Central with Love and Peace’, hetsi-panoherana iray mieritreritra ny hanao fitorevahana lehibe ao amin'ny faritra misy ireo fikirakiràna ara-bola ao Hong Kong, raha tsy avela mifidy ny kandidà ireo olom-pirenena. Notanisainy ny lalàm-panorenan'ny tanàna izay fantatra amin'ny hoe Lalàna Fototra :
Manana ny famaritana mazava tsara ny “fandriampahaleman'ny firenena” ny “Lalàna Fototra” ao amin'ny andininy faha 23. Ireo zavatra mandrahona ny fandriampahaleman'ny firenena dia ny famadihan-tanindrazana, fisaratsarahan'ny firenena, fikomiana, fifandirana amin'ny rafitra napetraky ny goveremanta foibe ao Shina, ary ny fangalarana ireo tsiambaratelon'ny firenena. Araka io famaritana io, nahoana ny fifidianam-bahoaka, tsy misy fanivanana mialoha avy amin'ireo mpametraka ny olona hosafidiana amin'ny fifidianana ny lehiben'ny mpanatanteraka no handrahona ny fandriampahaleman'ny firenena ? […]
Tokony manaraka ny Lalàna Fototra izay handray ny toeran'ny lehiben'ny mpanatanteraka eo, amin'ny fampiharana ny fahefana. Tompon'andraikitry ny raharaha anatiny ihany ny lehiben'ny mpanatanteraka, ary mitazona ny fahefana eo amin'ny tafi-piarovana sy ny diplômasia ny governemanta foibe. Mazava ny rafitra. Tsy misy idirany amin'ny fandriampahaleman'ny firenena mihitsy ny asan'ny lehiben'ny mpanatanteraka. Raha mihoatra ny fahefany ny lehiben'ny mpanatanteraka, ka ahitana porofo mazava tsara, afaka esorin'ny governemanta foibe izy, na dia tsy mametraka rahona ho an'ny fandriampahaleman'ny firenena aza.
Mba iantohana tsara fa ho olona tia tanindrazana ireo olona hofidiana ho lehiben'ny mpanatanteraka, te-hametraka rafitra sivana mialohan'ny fifidianana ny governemantan'i Beijing, izany hoe tokony hahazo mihoatra ny 50 isanjaton'ny vaton'ny kaomity mpanendry ireo rehetra hirotsaka hofidiana, mba ho lasa kandidà eken'ny fanjakana. Miatrika fivoriana any Beijing izao ny kaomity maharitry ny ‘National People Representative Conference’ (Kaonferansa Misolo Tena Ny Vahoakam-pirenena), ary azo heverina fa hiaro mafy ny heviny izy ireo mikasika ireo lalàm-pifidianana ao Hong Kong itakiana ny hoe sivanina ary ekena mialoha ny tena fifidianana ireo kandidà, .
Nino i Benny Tai fa ny rafitra tahàka izany indrindra no hanimba ny fandriampahaleman'ny firenena, satria mety hamilivily ny fananganana ilay kaomity mpanivana ny governemanta foibe, mba hiantohany fa ho azony fehezina ny 50 isanjaton'ny vato. Hampisy fifandirana eo amin'ny holafitra samihafa io fizotry ny dingana familiviliana/fanodinkodinana io. Nanamarika izy fa misy sosokevitra voasaina tsara, naroson'ireo manampahaizana amin'ny lalàna sy ireo mpanao politika mpomba ny governemanta:
Mba hanakànana ireo rehetra manohintohina ny fandriampahaleman'ny firenena tsy hihazakazka hofidiana ho lehiben'ny mpanatanteraka, nisy ireo nandroso sosokevitra voasaina tsara. Nanome hevitra ny hanasiana fanadihadiana ny resaka fahamendrehana i Joseph Chan, filoha fahiny tao amin'ny Sekolin'ny Lalàna tao amin'ny Anjerimanontolo tao Hong Kong, mba hiantohana fa tsy misy ahiana ny fomba fisainana sy ny fitondrantenan'ireo kandidà. Efa mipetraka ny fanadihadiana ny fahamendrehana ho an'ireo mpiasam-panjakana ambony ao amin'ny governemanta. Anthony Wu, mpikambana ao amin'ny Kaonferansa Fakàn-kevitra Ara-politikan'ny Kaomitim-Pirenen'ny Vahoaka Sinoa, nanome hevitra ny “hanaovana latsabato fitsipahana io rafitry” ny kaomity mpanendry io — raha 30 isanjato na mahery no tsy mifidy ilay mety ho atao ho kandidà, ary “raha tohanan'ny 60 isanjaton'ny mpikambana na mahery ny hanohitra ilay sosokevitra, tokony hiala amin'ny firotsahany hofidiana ilay kandidà.
Niray hevitra tamin'i Benny Tai, i He Weifang, mpampianatra lalàna ao amin'ny Anjerimanontolon'i Beijing, ary nanoratra tao amin'ny Sina Weibo, ilay sehatra malaza mpanome tolotra toy ny Twitter (efa nofafàna ny lahatsorany; ito ambany ito ny dika mitovy nalaina tamin'ny tatitry ny BBC amin'ny fiteny Sinoa):
Araka ny Lalàna Fototra, toy izao ny zavatra takiana amin'ny lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong, fanampin'ny fizakàna ny zom-pirenena sy ny taona, voalaza ao amin'ny andininy faha 47: “[ny lehiben'ny mpanatanteraka] dia tokony ho olon'ny fahamendrehana ary mifantoka amin'ny andraikiny”. Tsy misy fepetra voasoratra tahàka izany hoe “tia ny firenena ary tia an'i Hong Kong”. Tsy mitombina tsara araka ny lalàna ilay fitakiana naroson'ny Kaonferansa Misolo Tena Ny Vahoakam-pirenena.
Ninoan’i Chik Punshing, mpitoraka bilaogy ao amin'ny sehatry ny median'ny olom-pirenena inmediahk.net, fa entina hiarovana ny tombotsoan'ireo mpitondra ambony fotsiny ilay resaka tsara lahatra momba ny “fandriampahaleman'ny firenena”:
Fandrebirebena entina hisintonana ireo fihetseham-po amin'ny fitiavan-tanindrazana fotsiny ilay hoe fandriampahaleman'ny firenena. Hanampy ireo olona ambony eo amin'ny fitondrana io mba hahafahany manao ireo kaomity mpanivana ho saribakoly. Mazava ho azy fa mora kokoa ny manodinkodina vondron'olona vitsy noho ireo mpifidy miisa 3 tapitrisa. Ary mora kokoa ny manodinkodina anaty trano mikatom-baravarana tsy hitan'ny olona, noho ny fanodinkodinana misokatra ety ivelany. […]
Misy tombotsoa lehibe ho azy ireo eo ankilan'ilay resaka fialantsiny hoe fandriampahaleman'ny firenena. Tsy misolo tena ny firenena, na ny Antoko Kaomionista Sinoa akory izy ireo. Raha vao mahavita manodinkodina ny fifidianana izay ho lehiben'ny mpanatanteraka izy ireo, dia afaka hifehy ny governemanta sy ny fitsinjaram-pahefana koa. Jereo fotsiny ireo Faritany Vaovao any Avaratra-atsinanana, ny morontsiraka Lungmei, ny distrikan'i West Kowloon, ny lalàmby haingam-pandeha, ny nosy Lantau [naoty: tetikasa fampandrosoana misy resabe daholo ireo ohatra notanisaina ireo]. Indray andro, rehefa azony ny mamy rehetra [avy amin'ireo tetikasa fampandrosoana], ny renivola, na mena na mainty no tafajanona eo tsy maninona, hiala fotsiny ry zareo. Tsy misy miraharaha ny momba ny “fitiavana ny firenena sy ny fitiavana an'i Hong Kong” izany ireo. Sahala amin'ny fandrebirebena ara-pihetseham-po ny zavatra rehetra.
[…] Mahafantatra tsara ny fandehan-javatra ireo manampahefana any amin'ny Shina foibe, jereo fotsiny ireny famoretana maro vao haingana nahazo an'i Bo Xilai, Zhou Yongkang, Xu Caihou, ary koa ireny tambajotra feno kolikoliny ireny [samy nilaza ho tia firenena daholo izy rehetra ireny].
Nandritra izany, nianiana ireo mpanao lalàna mpiaro ny demôkrasia fa hifidy ny TSIA izy ireo amin'ny tetikasa fanovàna ny governemantan'i Hong Kong, raha toa ka ampiasaina ny fanivanana mialoha amin'ny fifidianan'ny vahoaka manontolo. Nandritra ny faran'ny herinandro, nanatrika ny “Diabe ho an'ny demôkrasia” izy ireo (jereo ny sary ery ambony) mba hanehoana ny fahavononany hiady hisian'ny demôkrasia tena izy ao Hong Kong.